Kubuntu အတွက်မဟာ KSplash (သို့) BootSplash | Linux မှ
Kubuntu အတွက် Great KSplash (သို့) BootSplash
ယခုအသုံးပြုသူများနှစ်သက်သည် Kubuntu 😀
ငါကကြိုက်တယ်ငါပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်၏လိုဂိုချပြီးစဉ်းစားနေပါတယ် debianနောက်ခံတန်ချိန်ကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ ငါမသိ၊ ငါ့ဆီသို့လာသည့်အရာများကိုငါတွေ့လိမ့်မည်။ ah
1. Terminal ကိုဖွင့်ပါ၊ ၎င်းတွင်အောက်ပါကို ရေး၍ နှိပ်ပါ [ရိုက်ထည့်ပါ]
cd $HOME/ && wget http://www.deviantart.com/download/251811766/kubuntu_minimalistic_splash_by_thales_img-d45x77a.rar && unrar x kubuntu_minimalistic_splash_by_thales_img-d45x77a.rar && sudo cp -R KubuntuLightSplash/ /usr/share/kde4/apps/ksplash/Themes/
၃ System preferences ရိုက်ထည့်ပါ Workspace အသွင်အပြင်.
4. ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘယ်ဘက်ဘားကိုသွားတယ်။ "ကြေညာသူမျက်နှာပြင်"။
5. ငါတို့၌ရှိသောအသစ်ကိုရွေးသည် (KubuntuLightSplash) ကိုနှိပ်ပါ aplicar.
ထိုအပင်ယနေ့ကျော်မ ... ပိုပြီးရှိပါတယ် ... ဟားဟား။
သင်တောင်းဆိုချက်ရှိပါက tell ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Kubuntu အတွက် Great KSplash (သို့) BootSplash
23 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
သင်က Taringa အသုံးပြုသူလား။
Naring, Taringa မှာအကောင့်မရှိဘူး၊ မင်းရှာနိုင်ရင်ဘာလို့မေးရတာလဲ။ 🙂
ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါမင်းရဲ့ post ကို repost လုပ်ပြီး (အရင်းအမြစ်ကိုတင်လိုက်တယ်) ပြီးတော့သူတို့တင်ထားတာကိုပြောကြတယ်၊ ငါကြည့်လိုက်တယ်၊ ဒီဘလော့ဂ်ကနေအကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ထားတဲ့အရင်းအမြစ်မထည့်ထားဘူး။ မင်းကမင်းပဲလို့ထင်ခဲ့တာ
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ။ အရင်းအမြစ်ကိုမထည့်ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဤအသုံးပြုသူမည်သည့် post ကိုမှ link ကိုပေးစေခြင်းငှါ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ငါ (KZKG ^ Gaara) Taringa တွင်အကောင့်မရှိ (ယခုငါဖန်တီးမည်။ ) သို့သော်ဤဆိုဒ်သည်တည်ရှိသည်။ သင်ဖော်ပြခဲ့သောဤ post ကိုမှတ်ချက်မချန်ထားနိုင်အောင်။ ?
သငျသညျ NFU ဖြစ်ရန်ရှိသည်
ပုံများကိုလက်မှတ်ထိုးပြီး desdelinux ၏လိပ်စာကိုထည့်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည် taringa x_X အသုံးပြုသူများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်
truko22 မှတ်ချက်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အားသတိပေးခဲ့သည်၊ မနက်ဖြန်၌တင်မည်
mmm ငါဒီ post ကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့ထက်မင်းမှာမြင့်မားတဲ့ karma ရှိဖို့လိုတယ်
သင် logo ကိုပြုပြင်သည့်အခါ Arch, hahaha ကိုသတိရပါ
ဒါကမင်းကိုငါပြောနေတာလား။ this_¬ ... ဒါကငါ့သွေးကိုဆူစေတယ်။
ငါသူရိုးရိုးရင်းမြစ်ကိုဖော်ပြရန်မေ့နေသည်ဟုထင်လိုသည်။ ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ် ပို၍ စဉ်းစားနိုင်သည်🙂
ဟုတ်တယ်ဟားဟားကျွန်တော်အမြဲမေ့မေ့သွားတတ်တဲ့အရာများအပါအဝင် distros အမြောက်အမြားအတွက်ဗားရှင်းများကိုငါလုပ်မယ်။ (Pardus, Mageia, Slackware, etc) haha
ကောင်းပြီ၊ အနည်းဆုံးတော့၎င်းသည် "သဘောတူညီခဲ့ပြီးပြီ" ဟုထင်ရသည်၊ ယခုအဆုံးသတ်ထွက်ပေါ်လာသည်
"ရင်းမြစ် - https://blog.desdelinux.net/9-comandos-combinaciones-muy-divertidos-e-inutiles-de-linux/«
စကားမစပ်ငါ huh? အဲဒီကောင်လေးမှာ Taringa မှာထုတ်ဝေတဲ့ဘလော့ဂ်တစ်ဝက်ရှိတယ်။
ခွင့်လွှတ်ပါTaringa haha ​​ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး) ဒါပေမယ့် ... တစ်ခုခုမှားပါသလား o_0U
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့၊ လုံးဝသဘောတူပါ agree
ဒါဟာလုံးဝမှာမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး :) ။
Hyoga အာမခံချက် ဟုသူကပြောသည်
ရိုးရှင်း၊ ကြော့ရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင်ထပ်မံပြောဆိုစရာမရှိပါ။ ပုံကသူ့ဟာသူပြောတယ်။
၎င်းကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ရန်ကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Kubuntu နဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက် console၊ Ppa နဲ့တခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်သိပ်မရင်းနှီးတော့ဘူးဆိုတာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
Hyoga Assure အားပြန်ပြောပါ
ရပ်တန့်ပြီးသင်၏မှတ်ချက်ကိုချန်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 😀
အသုံးပြုသူများသည် terminal ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။
^ ⁻ ^ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်
အဲ့ဒါငါပဲ? တိုးတက်မှုဘားကိုကျွန်ုပ်မတွေ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ် BootSplash ကိုမှန်ကန်စွာမမြင်ရပါ
Android က kernel 3.3 ကိုပြန်သွားသည်
Pardus ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုများ, ပြောင်းလဲမှုများ, တိုးတက်ကောင်းမွန်: D (အသေးစိတ်ကိုဒီမှာ)